Cake Riwaayad macaan leh Dahab Dahab ah - Sugar Geek Show - Keega
Video Bilaash Ah
Keeg qaanso-roobaad ah oo guriga lagu sameeyo oo lagu sameeyay lakabyo keeg subag caano subag ah oo khafiif ah iyo baraf cad fudud oo barafoobay
Keeggan qaansoroobaadku wuxuu iga dhigayaa mid aad u faraxsan. Waxaan gabi ahaanba jeclaaday jarjaran dhexdeeda si aan u arko dhammaan lakabyada quruxda badan ee quruxda badan! Qaybta ugu fiican ayaa ah, keeggaan qaansoroobaadku kaliya uma eka muuqaallo, wuxuu dhadhaminayaa gabi ahaanba wax la yaab leh. Ma yeelan doontid wax burbursan oo hadhay.
Keeggan qaansoroobaadku aniga aad buu gaar iigu yahay. Waxaan sugayay inaan sameeyo waqti dheer. Tan iyo markii aan ogaannay inaan uur ku leennahay wiilkeenna, Cesraa, waan ogaa inaan doonayo inaan isaga uga dhigo keeg qaanso roobaad isaga u ah dhalashadii badh (6 bilood).
Dadka intiisa badani way ogyihiin in aniga iyo seygeygu ay ahayd inaan soo marno daaweyn badan oo madhalaysnimo ah si aan u helno gacaliyeheenna Avalon. Ka xishoon maayo. Waxay ila tahay inaan inbadan kahadalno dhalmo la’aanta iyo sida ay u badantahay. Marka waxaan dareemeynaa kalinimo.
Waxaan bilownay daaweyn LABA sano ka hor. Waxba ma shaqeynin. Jidhkaygu wuu ila diriray. Meel fiican kumaan jirin niyad ahaan ama maskax ahaanba.
Waxay u egtahay waali laakiin waxaan ku riyooday inaan wiil dhalanay. Cidna uma sheegin laakiin rajo ayaan qabtay intii karaankayga ah.
Waxaan si daacadnimo ah uga dhawaajinay inaan waligeen yeelan doono ilmo labaad. Laakiin waxaan kaliya naftayda ka dareemay inaan helnay ilmo labaad oo na sugaya. Marka maanaan quusan.
Daaweyntaas oo dhan iyo daawooyinkaas oo dhan ka dib, waxaan ku dhammaannay HAL ukun ah. Haddii aad soo martay IVF adiga. ogow in fursadaha HAL ukuntaas ay aad u hooseyso. Kamaan helin rajadaydii.
Laakiin hal beedkaasi wuu dhegay. Oo halkan waxaan la joognaa wiilkeenna quruxda badan. Qaanso roobaadka dabeylaha kadib. Soojiidashadayada nasiibka leh. Dhameystirka reerkeena.
Cunto noocee ah ayaa ugu fiican keega qaanso roobaadka?
Markaa waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan dubno lakabyada qaansoroobaadyada. Tani waxay u muuqan kartaa cabsi gelin laakiin runti runtii way fududahay.
Waxaan isticmaali doonaa keegga aan jeclahay, velvet cad. Kaliya maahan. waa keeggan macaan, laakiin sidoo kale waa mid aad u cad sidaa darteed midabka si fiican ayuu u qaadan doonaa.
Haddii aad isku daydo inaad midab ku darto keega vaniljka ee ay ku jirto jaallo ah, jaallo-cadkaas ayaa qalloocinaya midabadaada markaad wax dubayso.
Sababta kale ee jilicsan ee jilicsan ayaa ku habboon samaynta keega qaanso roobaadka ayaa ah inaysan si aad ah isugu qasmi doonin markaad midabka ku darto.
Waxaan ku darsaday midab jilicsan jilicsan marar badan, anigoo wax walba ka sameynaya maro jilicsan oo casaan ah, maro jilicsan oo cagaar ah, iyo xitaa buluug buluug ah. Dareemku had iyo jeer wuxuu noqdaa mid la yaab leh.
Sida loo sameeyo lakabyada keega qaansoroobaad
Diyaarso digsiyadaada 8 ″ x2 ″ keega. Waxaa laga yaabaa inaadan haysan 6 keeg oo keeg ah oo isku wada cabir ah (anigu ma lihi) markaa ku hayso digaaga keega qaboojiyaha inta keegaaga kale ay dubanayaan. Runtii way dhuuban yihiin sidaa darteed si dhakhso leh ayey u kariyaan.
Ku dabool digsigaaga keega lakab ah keega goop kuleyli foornadaada ilaa 335ºF. Waxaan sidoo kale gashaday warqad yar yar oo xaashi ah hoosta maqaaxiradeyda si ay ugu fududaato in ay ka soo saaraan digsiga maadaama ay aad u dhuuban yihiin.
Si aad u sameysid lakabkeena keega qaanso roobaadka, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah inaad isku qasto qashinkaaga (raac raashinka hoos kuqoran) ka dibna uqeybiso dubkaaga 6 saxan si siman
Baaquli kastaa waxay haysaa 15 wiqiyadood oo ah baytar cufan. Waxaan adeegsaday a Miisaanka jikada inaan miisaanka saaro si ay dhammaantood u sinaadaan.
Waxaan u adeegsanayaa midabbo koronto Mareykan ka sameysmaya mana sameynayo qaanso roobaadka saxda ah, qaanso roobaadka ayaa ka badan qaabka Lisa Frank. Runtii waan jeclahay midabadan korantada maxaa yeelay waxay sameeyaan midabyo neon aad u dhalaalaya umana baahnid inaad isticmaasho midab badan oo cunno ah.
Midabada aan adeegsaday
sida loo sameeyo iskudhafka keega sifiican
Waxaad gebi ahaanba tagi kartaa qaansoroobaadyada caadiga ah waxaadna isticmaali kartaa casaan halkii casaan, buluug halkii aad ka heli lahayd midab buluug ah iyo buluug boqortooyo halkii aad ka isticmaali lahayd buluug koronto ah.
Ku dar hal dhibic ama laba midab baaquli kasta kuna walaaq qaaddo ilaa la isku darayo. Hubso in cagaarka aad u isticmaasho wax yar oo huruud ah iyo in yar oo cagaar ah sidaa darteed cagaarku waa ka firfircoon yahay.
Liinta, isticmaal liin yar iyo huruud yar si ay liinta uga dhigto mid firfircoon.
Midabka guduudka ah, ku dar wax yar oo casaan iyo guduud ah si midabku u noqdo mid firfircoon.
Ku shub batterigaaga dherigaaga keega (seddex jeer ayaan kariyey oo waxaan ku riday 15 wiqiyadood oo bur ah digsi kasta).
Markay dhammeeyaan dubista, waxay bilaabi doonaan inay xoogaa yar ka soo jiidaan cidhifyada digsiga (taasi waa caadi) u oggolow inay xoogaa ku qaboojiyaan digsiga ka hor inta aysan u soo jeesan sariirta qaboojinta si ay si buuxda u qaboojiso.
Waxaan keegayaga dhigay qaboojiyaha muddo 30 daqiiqo ah si aan u adkeeyo ka hor inta aanan iska jarin qubbada, dhinacyada buniga ah, iyo gunta hoose ee buniga ah.
Jarida keegaaga ayaa kaliya ka dhigaysa xaleefyada mid aad u fiican oo qurux badan markaad jarjarayso.
Sida loo qurxiyo keega qaanso roobaadka
Waqti aan ku qurxinno keeggeena qaanso roobaadka! Waxaan isticmaalayaa tayda subag macaan maxaa yeelay si dhakhso leh ayey isugu timaaddaa. Waxaad isticmaali kartaa wax kasta oo subag ah inkasta oo sida oo kale swiss meringue buttercream , Saliida talyaaniga ee meringue ama xitaa farmaajo barafoobay .
Lakabkaaga koowaad dhig dusha keegaaga. Waxaan ka shaqeynayaa ujawaab si howshan oo dhan looga dhigo mid fudud.
Codso lakab khafiif ah oo ah buttercream. Toogasho qiyaastii 1/4 ″ qabow.
Spatula-kaagu ha ahaado mid hagaagsan oo fidsan si aad buttercream-kaaga u yeesho dhumuc le'eg.
Waxaan ka bilaabayaa guduudka maxaa yeelay taasi macno ayey ila leedahay maskaxdayda laakiin waxaad ku bilaabi kartaa casaanka haddii aad rabto inaad u leexato dhanka ka soo horjeedka.
Sii wad qaboojinta oo ku dhaji qaabkan inta ka hartay lakabyada ka dibna siiso keegga oo dhan jaakad jajab fiican leh si aad ugu dhejiso dhammaan jajabyada qaanso roobaadka.
Qabooji keegaaga muddo 15 daqiiqo ah si aad u adkeyso lakabkaas saliidda leh.
Ku dhammee keegaaga lakabka ugu dambeeya ee buttercream oo sifiican ugu nadiifi mashiinkaaga wax lagu xoqo iyo spatula-ka.
Ka dib markii aan qaboojiyey keegga, waxaan ku darsaday xoogaa saydhis ah oo qurxoon xadka hoose ee keegga, ka dib waxaan u wareejiyay keeggayga sabuuradda keega.
Waxaan ku dhammeeyaa keeggaan a biyo ganache faleebo . Waxaan isticmaalay 5 wiqiyadood oo nacnac nacnac cad ah, 1 ounce oo nacnac nacnac dhalaalaya iyo 6 wiqiyadood oo biyo ah.
Ka dib markii aan dhalaalay, waxaan ku daray dhowr dhibcood oo midab leh cunno hurdi koronto ah si aan u sameeyo midab dhalaal nacnac dahab ah. Waxaan ku faleeyey ganache biyo ah keegga aan qaboojiyey. Kadibna dahab ku rinjiray qaar runti wasakh caag dahab ah iyo vodka.
Hubso in isku-darkaaga boodhka iyo vodka uu aad u qaro weyn yahay, sida rinjiga si aad u hesho caymis wanaagsan.
Ka dib waxaan ku soo daray xoogaa yar oo wareeg ah oo dhaxan cad oo dusha ka saraysa waxaanan ku darsaday qaar ka saydh. Waxaan isticmaalay caarada dhuumaha 1M si aan u sameeyo wareegyada.
Annaguna waanu dhammaynay keeggii qaansoroobaadkeenna! Miyaanay u muuqan wax qurux badan! Waan jeclahay sida jeexjeexyadu u egyihiin waana lahjad ku habboon sawirka Bishan Cesraa.
sida loo dhalaaliyo shukulaatada caaryada
Kaliya ma ahan keegga qaansoroobaad qurux badan oo midab leh, laakiin sidoo kale wuxuu dhadhamiyaa runtii dhadhan fiican. Waxaa laga sameeyay keegga caanka ah ee keegga jilicsan ee jilicsan iyo subagga fudud ee loo yaqaan 'butterkream', keeggaan qaansoroobaadku wuxuu ka dhigayaa keeg munaasabad gaar ah oo munaasib ah! * Fiiro gaar ah * haddii aad isku hagaajiso cabbirka keega adoo adeegsanaya kalkuleytar, maskaxda ku hay in digsiyada ay tahay in la buuxiyo oo keliya kalabar (1 'dheer) marka lakabyadu aad uma weyna. Xisaabiyaha waxaa loo sameeyay labo lakab oo dhaadheer. Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:labaatan daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:853kcal
Waxyaabaha Cake Rainbow
▢24 oz (680 g) bur keeg
▢24 oz (680 g) sonkorta granulated
▢laba Tbsp (laba Tbsp) budada dubista
▢1 tsp (1 tsp) Fixiso
▢10 oz (283 g) ukun cad heerkulka qolka
▢6 oz (170 g) saliidda cuntada
▢18 oz (510 g) caano subag heerkulka qolka ama in yar diiran
▢12 oz (340 g) subag aan cusbo lahayn oo jilicsan
▢1 Miisaska cuntada (1 Miisaska cuntada) soosaarida vanilj
Waxyaabaha Fudud ee Fibering Buttercream
▢8 oz (227 g) ukunta la kariyey
▢32 oz (907 g) sonkorta budada ah
▢32 oz (907 g) subag aan cusbo lahayn jilicsan laakiin aan dhalaalin
▢laba tsp soosaarida vanilj
▢1 dhibic (1 dhibic) midabaynta cuntada guduudan si loo caddeeyo caanaha subagga loo caddeeyo
Dahab Dahab ah
▢5 oz (142 g) nacnac cad ayaa dhalaaliya
▢1 oz (28 g) nacnac shukulaatada ayaa dhalaalay
▢1 oz (170 g) biyo kulul
▢1 tsp Runtii balaastikada waalan ee boodhka weyn ee dahabka ah
▢1/4 tsp waligaa cad ama vodka ama liinta laga soosaaray
▢Lifaaq Ku Xidhnow
▢Spatula oo ah 'Offset Spatula'
▢1M Talo Bixin
FIIRO GAAR AH: WAA MUHIIM IN dhammaan waxyaabaha heerkulka qolka ee kor lagu soo sheegay ay yihiin heerkulka qolka oo lagu cabiro culeys si maaddooyinka ay isugu qasmaan oo ay si sax ah isugu daraan. Foornada kuleylka illaa 335º F / 168º C
Diyaarso lix (8'x2 ') keeg oo keeg ah oo leh keega oo ku rid xaashi wareegsan oo xaashi ah santuuqa salka hoose ee digsiga si fudud looga saaro keegga
Isku dar 8 oz oo caano ah iyo saliida isla markaana dhinac iska dhig.
Isku dar inta u hartay caanaha, ukunta cad, iyo vaniljka si wadajir ah, iskuday si aad ukunta u jajabiso oo aad dhinac u dhigtid.
Isku dar bur, sonkor, budada dubista, soodhaha iyo milixda baaquli ku dhexjiro miisaanka leh lifaaqa suufka. Isku qas 10 sekan si aad isugu darto.
Ku dar subaggaaga jilicsan walxaha qallalan oo isku walaaq hoose illaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn (qiyaastii 30 sekan).
Ku dar caano / saliid isku dar ah iskuna dar isku dar ilaa walxaha qallalan ay qoyaan ka dibna ku boodaan ilaa med (dhig 4 dhig KitchenAidkayga) iskuna darso 2 daqiiqo oo buuxa si aad u horumariso qaabka keegga. Haddii aadan u oggolaan keeggaaga inuu ku qasmo talaabadan keegaaga ayaa burburi kara.
Xaaq weelkaaga ka dibna xawaaraha hoos u dhig. Ku dar ukuntaada cad / caano isku dar ah seddex qaybood, adoo u oggolaanaya in isku-darka iskudhafan 15 ilbidhiqsi inta udhaxeysa iskudarka. Mar kale xoq dhinacyada si aad u hubiso in wax waliba ay isku darsameen.
Udiyaar garowgaaga 6 saxan. Miisaanka kasta ku miisaan 15 wiqiyadood oo baytar ah.
Ku rinji baaquli kasta midabadaada cuntada korontada ku jirta. 1/2 tsp casaan ah oo loogu talagalay lakabka casaanka, 1/4 tsp huruud ah oo lagu daray 1/4 tsp oranji ah lakabka liinta, 1/2 tsp jaalle ah lakabka jaalaha ah, 1/4 tsp jaalle ah oo lagu daray 1/2 tsp cagaaran lakabka cagaaran, 1/2 tsp buluug ah lakabka buluuga, 1/4 tsp pink iyo 1/2 tsp purple for lakabka guduud.
Dubo lakabkaaga illaa 20-24 daqiiqo ama illaa geesaha KELIYA ay bilaabaan inay ka soo baxaan digsiga keega. Ha ku dubin ka-yar ama dhexda keega ayaa burburi doona.
WAQTIGA WAAYO KU DHAQO WADAAD SHARCIGA markabka korkiisa si aad u sii deyso uumiga keega. Tani waxay joojineysaa keegga inuu yaraado.
Keega ha ku qaboojino 10 daqiiqo gudaha digsiga ka hor inta uusan soo daadin. Keegga ayaa yara yaraanaya taasna waa caadi. Qabooji lakabyada keegaaga 30-60 daqiiqo kahor jaridda keegaaga. Dhaxan oo buuxi qabow subag leh.
Ka dib marka buttercream-kaagu fiicnaado, keega dib ugu celi qaboojiyaha 15 daqiiqo ka hor intaadan marin faleebadaada.
Sug in faleebadaadu ay dhigato ka hor intaan lagu rinjiyeyn rinjiga dahabka. Ku dhammee keega rosettes-ka buttercream iyo rusheeyo badan.
Tilmaamaha Easy Buttercream
Ku rid sonkorta budada ah iyo ukunta cad ee la kariyey weelka weelkaaga istaaga oo ku lifaaq lifaaqa.
Isku qas si hoose si aad isugu darto ka dibna u kordhi xawaaraha sare.
Ku dar subagga jajabyada yaryar intaad isku qasayso. Sii wad isku darka ilaa inta subagga oo dhan lagu daro. Kadib ku dar vaniljigaaga iyo milixda.
Isku walaaq dusha sare illaa iftiinka iyo qalafsanaanta oo aan mar dambe u dhadhamin sida subagga. Kudar hal dhibic oo ah midabaynta cuntada midabka guduudka ah si loo yareeyo muuqaalka huruudda ah ee buttercream (ikhtiyaar).
Ka qaad lifaaqa whisk oo ku beddel lifaaqa galka. Isku qas si hoose illaa 10 daqiiqadood si aad uga saarto xumbo ka socota buttercream.
Tilmaamaha Daabashada Dahabka
Ku dhalaal shukulaatada ku jirta microwave-ka 15-ilbiriqsi oo koror ah illaa inta si buuxda ugu dhalaalayso.
Ku dar biyahaaga kulul iyo microwave 15 ilbiriqsi oo kale
Walaaq illaa intaad ka siman tahay. Kadib ku dar midabaynta cuntadaada hurdiga ah. Walaaq illaa intaad ka siman tahay.
Dhig ganache biyaha bacda tuubada, ka jar qeybta caarada oo ka falee ganacsiyada hareeraha cakekaaga keega la qaboojiyey. Markay dajiso ka dib, waxaad isku qasan kartaa boorkaaga dahabka ah iyo vodkaaga isla markaana rinji kartaa dahabka faleebada ah
Keegani waa mid aad u DHEEL (qiyaastii 7 ') sidaa darteed jeexjeexyadaadu aad bey u dheereyn doonaan. Waad kala goyn kartaa laakiin markaa waad burburin laheyd qaanso roobaadka. * Fiiro gaar ah * haddii aad isku hagaajiso cabbirka keega adoo adeegsanaya kalkuleytar, maskaxda ku hay in digsiyada ay tahay in la buuxiyo oo keliya kalabar (1 'dheer) marka lakabyadu aad uma weyna. Xisaabiyaha waxaa loo sameeyay labo lakab oo dhaadheer. Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin 1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebin ama uusan curricamaynin. 2. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga ka hor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey ee xiisaha leh haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isku dhejinta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si loogu qaado gaadiid fudud. Wax badan ka baro qurxinta keeggaaga ugu horreeya. 5. Haddii cuntada lagu kariyo ay ku baaqeyso waxyaabo gaar ah sida burka keega, ku beddelashada dhammaan ujeeddada bur iyo galleyda laguma talinayo haddii aan lagu caddeyn karinta inay ok tahay. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto. Dhammaan ujeeddada burku waa bur caadi ah oo aan lahayn wakiilo kacaya. Waxay leedahay heer borotiin ah 10% -12% Daqiiqda Keeg waa daqiiq jilicsan, oo bur ah borotiin ka yar 9% ama ka yar.
Ilaha burka keegga: Boqortooyada Midowday - Shipton Mills Cake & Burka cajiinka
U adeegida:1adeegaya|Kalori:853kcal(43%)|Kaarboohaydraytyada:92g(31%)|Protein:7g(14%)|Dufan:52g(80%)|Dufan Dufan:3. 4g(170%)|Kalastarol:115mg(38%)|Sodium:365mg(shan iyo toban%)|Kaliumperyamper:207mg(6%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:70g(78%)|Vitamin A:1416IU(28%)|Kaalshiyam:97mg(10%)|Bir:1mg(6%)
maxaa fondant laga sameeyay
kariimka qabow daryeelaha leh gelatin
sida loo sameeyo keeg xirfadlayaal raadinaya